Football Khabar » बार्सिलोना रोजेकोमा डे जोङलाई पछुतो !
बार्सिलोना रोजेकोमा डे जोङलाई पछुतो !
डे जोङ बार्सिलोना जानुअघि इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाले नेदरल्यान्ड्सका प्रशिक्षकसँग डे जोङ अनुबन्धका लागि छलफल गरेका थिए । त्यसबेला सिटी डे जोङलाई डेभिड सिल्भाको उत्तराधिकारी बनाएर भित्र्याउन चाहन्थ्यो ।
तर, डे जोङले बार्सिलोना रोजेपछि सिटी चुप रह्यो । केही समयअघि डच टिमका प्रशिक्षक रोनाल्ड कोएमानले पनि एक अन्तर्वार्तामा बोल्दै आफूले डे जोङ ला लिगाभन्दा प्रिमियर लिग जाउन् भन्ने चाहेको भए पनि त्यस्तो नभएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘पेपले मसँग खुलेरै कुरा गरे । हामीबीच राम्रो सम्बन्ध छ । तर, डे जोङले स्पेन रोजे । डे जोङलाई पेपसँग काम गर्दा उनका लागि सबैभन्दा उचित हुने मेरो सल्लाह थियो ।’
प्रकाशित मिति १४ पुष २०७६, सोमबार २०:२४